Sary Hosodoko Fahagola Hita Vao Haingana, Mety Hanova Ny Tantaran’ny Machu Picchu Araka Ny Nahafantarantska Azy Hatrizay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2016 3:55 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, русский, Nederlands, Ελληνικά, عربي, नेपाली, Français, Italiano, Español
Machu Picchu. Sary an'ilay mpampiasa Flickr , Dan Doan (CC BY-NC-ND 2.0).
Tsy mitsahatra ny mampitolagaga ny Machu Picchu, izay raisina ho toy ny sanganasa amin'ny resaka maritrano sy injenieria, nambara tamin'ny 2007 ho isan'ireo Zavamahagaga Fito eto Ambonin'ny Tany.
Ny 4 Jolay, nitatitra ny nahitàna vaovao indray sary hosodoko fahagola miisa roa natao tambonin'ny vato, tany akaikin'ny sisam-paharavàna tavela tamin'ilay tanàna Inca malaza erantany i Pedro Astete, talen'ny vala arkeolojika nasionaly Machu Picchu:
Sarinà llama iray, lehilahy iray, ary eo ambonin'izy roa misy kisary jeometrika iray, no hita tao amin'ny faritr'i Pachamama, eo amin'ny làlana fidirana ho ao amin'ny faritra arkeolojika Machu Picchu.
Tamin'ny […] 1912, fasana efatra no hitan'ny andiany faharoa tamin'ireo Peroviana mpikaroka avy amin'ny Anjerimanontolon'i Yale, teo ambany fitarihan'i Hiram Bingham. Hatreto, anefa, tsy mbola nisy [nahamarika] [ireo sary].
Efa nisy drafitra hanaovana fandavahana misimisy kokoa tao amin'ilay faritra, izay hatramin'ny fotoana iresahana aloha dia tsy azon'ny olon-drehetra idirana. Tsy maintsy mbola hanaovana fitsirihana lalindalina kokoa ireo sary hita mba hahazoana antoka, saingy ny Vavahadin-tseraseran'ny Fizahantany ao Però, mitatitra fa mety ho sary efa tamin'ny vanimpotoana talohan’ ny Inca izy ireo:
Mety hanova ny tantara efa fantatsika hatrizay momba ilay faritra arkeolojika io, satria ireo sary dia mety hanome fanazavàna momba ny mponina niaina talohan'ny Inca tao amin'ilay faritra, hoy i José Basante.
Nilaza ihany koa i José Bastante, tomponandraikitr'ilay fandaharanasa fittrandrahana ilay faritra masina, fa mety “hanaporofo ny naha-toerana manokana ilay faritra ho an'ireo olona talohan'ny Inca izany. Vao manomboka mihitsy izao ny fanadihadiana”.
Tsy hoe tsy nisy nanakiana akory ilay vaovao, araka ny filaza sasany, tsy zavabaovao vao hita velively io. Tranonkala iray antsoina hoe Archaeology of Peru no nilaza fa sary efa nalaina tain'ny 2009 teo amin'ilay toerana ireo mampiseho sary hosodoko ireo:
Efa ela no nahafantarana tsara ireny sary hosodoko ireny ary afaka jerena tsara mihitsy satria hita manamorona ny arabe ao Intipunku. Sary efa roapolo taona lasa no ananantsika ary maro ny mpitaridia mpitondra mpizahatany no mahalala ny fisian'izy ireny. […] Efa notanisaintsika tao anaty tatitra jeolojika iray ireny sary hosodoko ireny, tatitra momba ireo fihotsahan'ny tany tao Machupicchu, tany amin'ny fiandohan'ny taona 2000s tany.
Araka ny efa nampoizina, noraisin'ny Twitter ihany koa ilay vaovao, araka ny hita ao anaty bitsika iray nalefan'ny gazety miteny Espaniola ao Etazonia, Diario Las Americas, izay mizara sary iray ahitàna ireo hosodoko:
Ireo sary hosodoko vaovao vita ambony vato hita tao Machu Picchu
Namelona indray ny fahalinan'ny rehetra amin'ireo zavatra momba ny Machu Picchu ety anaty aterineto ilay fahitàna, ary matetika ireo olontsotra mpampiasa Twitter no manondro lahatsary roa izay mampiseho toerana samihafa ao anatin'ilay toerana fikarohana arkeolojika. Ny iray amin'ireny, noraketina tany amin'ny taona 40 tany ho any, dia manangona ireo sary avy aminà andian-toerana manana lanja arkeolojika, tao Cusco, toa an'i Ollantaytambo, Písac, ary hatrany Juliaca sy Arequipa. Ampahany amin'ny tahirin'ny Mozea arkeolojika sy antropolojikan'ny Anjerimanontolon'i Pennsylvanie ilay lahatsary. Soritan'ilay mpampiasa izay nizara azy io ny habetsahan'ireo fahasamihafàna ara-kolontsaina efa hita tao amin'ny faritra nandritry izay ampaham-potoana izay (taona 40).
Ny lahatsary eto ambany dia efa tamin'ny taona 1936 ary nijanona tsy nisy nahalala raha tsy amin'izao fotoana izao. Fitetezana ny faritra manodidina ireo toerana samihafa anaovana fikarohana ao Machu Picchu izy io, arahan'ny mozika lafika tena ahafantarana ny Andes.